Amashidi ensimbi engagqwali iphucuziwe Abenzi - Amashidi wensimbi engagqwali aphucuziwe iFektri, abahlinzeki
intengo yensimbi engagqwali iphucuziwe
Incazelo elula ngenani lentengo yensimbi engagqwali
Ukuze flat Insimbi engagqwali, imvamisa iphucuziwe njengamashidi futhi isho ukujiya okuncane, kepha ngesinye isikhathi ipuleti elijiyile kufanele libe lipholile ukuze kufakwe isicelo esikhethekile. Futhi iningi lamapuleti lipholishiwe ngendlela yokupholisha ngomshini.
Insimbi engagqwali evame ukusetshenziswa indlela wokucwebezelisa：
Izindlela ezisetshenziswa kakhulu njengamanje yilezi: ukupholisha i-electrolytic, ukupholisha i-electrochemical, ukupholisha ngomshini
Inqubo yokupholisha i-electrochemical yehlukaniswe ngezinyathelo ezimbili: (1) Ukulinganiswa kweMacro: umkhiqizo oncibilikisiwe usakazeka ungene ku-electrolyte, futhi ubukhulu bendawo yento buyancipha, iRal μm. (2) Ukululama okukhanyayo okuphansi: Ukwehlukaniswa kwe-Anodic, ukukhanya kwendawo kuyathuthukiswa.
I-NO.4 uhlobo lwenqubo yokwelashwa ebusweni be-polishing. Ukupholisha nokuqeda ishidi lensimbi engagqwali ngento yokugaya enosayizi wezinhlayiyana eziyi-150 ~ 180 njengoba kuchaziwe ku-GB 2477.
Ukuncishwa okukhanyayo ubuchwepheshe bokucubungula indawo, ikakhulukazi ngemuva kokufakwa esikhaleni esikhaleni, izinga lokushisa lehliswa kancane esikhaleni esivaliwe okungenani ngama-degree angama-500 bese selehlile ngokwemvelo, kuzoba nokukhanya ukuze kungadali ukuqothuka.